डा. गोविन्द केसी अनसन तोड्दै, सरकारसँग ४ बुँदे सहमति - Nepal News - Latest News from Nepal
डा. गोविन्द केसी अनसन तोड्दै, सरकारसँग ४ बुँदे सहमति
काठमाडौं,साउन १० । स्वास्थ क्षेत्रको सुधारको लागि आमरण अनसन बसेका डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच ४ बुँदे सहमति भएको छ । अनसनको १५ औं दिन डा. केसी र सरकारबीच ४ बुँदे सहमति भएपछि सामाजिक अभियन्ता केसीको अनसन पनि तोडीने भएको छ ।
सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गर्ने सहमति पनि भएको छ । यस्तै विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र दश वर्षसम्म मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेका मनाशयपत्र नविकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा। गोविन्द के।सी।बीच मिति २०७२/५/१९ मा भएको सम्झौताको बुँदा नं. १ ‘ख’ पालना गर्ने सहमति भएको छ ।
सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । विगतमा भएका सम्झौताको सम्बन्धमाका बारेमा पनि केसी र सरकारबीच सहमति भएको छ । त्रि.वि. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन अविलम्ब नियुक्ती गर्नका लागि त्रिविका उपकुलपतिलाई सहकुलपतिबाट निर्देशन दिने भनिएको छ।
आगामी शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको शुल्क लिने व्यवस्था गर्न विगतमा भएको परिपत्रको स्मरण गराउँदै शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बद्ध विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने भएको छ। यसको प्रगती समयसमयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने भनिएको छ। सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा निःशुल्क स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकहरुका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करारको अवधि सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयाकमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने गर्ने गरी सहमति भएको छ।
सहमतिको लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक तथा स्वास्थ सचिव डा. सनेन्द्रराज उप्रेती, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारी र शिक्षा सचिव लवदेव अवस्थी अनसनस्थल शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेका थिए । अब सहमती पद्धि डा. केसीको आमरण अनसन भोली तोडीने पक्का भएको छ भने केपी ओली सरकार बहिर्गमनसँगै केसीको मागमा बनिरहेको उदासिनता र वेवास्ताको कालो धब्बा पनि केही सम्म भनेपनि हट्ने भएको छ ।
के हुन्छ अबको प्रक्रिया ? अब यसरी चुनिनेछ संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्री